लघु उद्यममा लगानी – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । ५ आश्विन २०७८, मंगलवार १५:३८ मा प्रकाशित
कर्णालीको आर्थिक अवस्था सवल छैन । अहिले पनि यहाँका आधा नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । यसले गर्दा पनि यहाँका नागरिकलाई जीवनयापनमा समस्या हुने गरेको छ । उद्योग र कलकारखानको पनि विकास भएको छैन । उद्योग नै नभएपछि काम र रोजगारी सिर्जना हुने भएनन् । केवल कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्रका कारण धेरै नागरिक बेरोजगार छन् । यसको असर अधिकांश कर्णालीबासीलाई छाक टार्नका लागि परदेश जानुपर्ने अवस्था छ । बर्सौदेखि यहाँका नागरिक रोजगारीका लागि भारत लगायतका विभिन्न देशमा धाउन बाध्य छन् । घरपरिवार छाडेर अर्कोको भूमिमा पसिना बगाउने रहर होइन ।
यो बाध्यता हो । जसकारण आज पनि यहाँका अधिकांक परिवारका सदस्यहरु एक छाक खाना र एकसरो कपडाको जोहो गर्नकै लागि कालापहाड धाउने गरेका छन् । आँगनमै रोजगारी र आयआर्जनका विकल्प नहुँदा उनीहरु बाहिर जानु परेको हो । विदेशमा श्रम गरेर पनि सहज रुपमा तलव नपाउने र परिवारबाट टाढा रहेर अपमान सहनुपर्ने धेरै युवाको बाध्यता छ ।
देशमा संघीयता आएपछि केही परिवर्तन हुने आश नागरिकमा थियो । निर्वाचनको बेलामा नेता र राजनीतिक दलले जारी गरेको घोषणापत्र र आश्वासनले चुनाव त जिते । गाउँगाउँमा सरकारको उपस्थिति पनि भयो । गाउँका सिंहदरबार भनिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने नारा नै लगाए । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई नै प्राथमिकता दिए । तर पनि अवस्था त्यस्तो देखिएन । सरकार र नेताहरुले भने झैं गाउँमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएनन् ।
संघीयताको स्वाद चाख्न पाइने आश गरेका कर्णालीबासीलाई फेरि पनि कालापहाड र भारतका शहरमा रोजगारीका लागि धाउनैपर्ने अवस्था छ । यसमा कमजोरी कसको ? किन नेता र दलहरुले आफ् नो निर्वाचनको घोषणापत्र र आश्वासन अनुसार काम गरेनन् ? यसको जवाफ समयले माग्ने नै छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले केही प्रयास गरेका छन् । तर ती पर्याप्त भने छैनन् । केवल प्रचारका लागि मात्र बजेट सक्ने योजना संचालन गर्ने गरिएको छ ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले रोजगारी दिन भन्दै केही वर्षदेखि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत केही विकासका काम भएका छन् भने स्थानीयले पनि रोजगारी पाएका छन् । तर यो कार्यक्रम दिगो भने देखिदैन । वर्षको अन्त्यमा असार मसान्तमा बजेट सक्नमा मात्र केन्द्रीत जस्तो देखिएको यो कार्यक्रमले स्थानीयलाई दिर्घकालीन र स्थायी प्रकारको रोजगारी दिन सम्भव छैन ।
तसर्थ केहीदिन काम गरेर ज्याला दिएर रोजगारी सिर्जना गरिएको प्रचार गर्नुभन्दा बरु उत्पादनमुलक उद्योग र साना उद्योगमा अब लगानी हुन आवश्यक छ । यसले स्थानीयलाई निरन्तर रोजगारी र आयआर्जनमा जोड्न सम्भव हुनेछ । त्यतिमात्र होइन, सरकारी बजेटको सदुपयोग हुनेछ भने स्थानीयले पनि स्वरोजगार बन्ने मौका पाउनेछन् ।